Tababare Ernesto Valverde Oo 14 Xidig Oo Da'yarta La Masia Ah Kulankoodii Ugu Horeeyay Safay Iyo Saamaynta Ay Mustaqbalka Yeelan Karaan. - Gool24.Net
Tababare Ernesto Valverde Oo 14 Xidig Oo Da’yarta La Masia Ah Kulankoodii Ugu Horeeyay Safay Iyo Saamaynta Ay Mustaqbalka Yeelan Karaan.
Tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa dib u soo noolaynaya rajadii xarunta da’yarta kooxdiisa ee La Masia goobtaas oo ahayd halkii ay ka soo baxeen xidigo magac wayn kubbada cagta ku yeeshay oo taariikh badan soo sameeyay.
Xarunta caanka ah ee La Masia ayaa halis wayn ku jirtay sanadihii la soo dhaafay kadib markii ay siyaasada Camp Nou u jan-jeedhsatay soo iibsashada ciyaartoy qaali ah oo ay kooxaha Yurub kala soo wareegeen.
Min Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Gerard Pique ilaa Sergio Busquets waa magacyada kubbada cagta sumcada wayn ku soo yeeshay ee ka soo baxay xarunta La Masia laakiin waxa uu Valverde u muuqdaa in uu soo nooleeyay xaruntii la sheegayay in ay burburayso ee madax wayne Bartomue iyo maamulkiisa lagu eedaynayay.
Laakiin Ernesto Valverde ayaa muddadii uu joogay waxa uu kulamadii ugu horeeyay ee kooxda kowaad soo safay 14 xidig oo da’yarta La Masia ka soo baxday ah, kuwaas oo waliba ay intooda badani si wayn isku muujiyeen.
Ernesto Valverde ayaa u muuqda mid magiciisa waqti badan la xusuusan doono xataa haddii uu Barcelona ka baxo waqtiyada dhaw kadib markii uu aduunka baray magacyo aan markii hore laga aqoon saaxada kubbada cagta.
Waxaa saamaynta ugu badan yeeshay 14ka xidig ee uu Ernesto Valverde kulankoodii ugu horeeyay soo safay Ansu Fati kaas oo isaga oo 16 sano jir ah awooday in uu boos ka helo kooxda kowaad.
Ansu Fati waxa uu ka soo dul booday kooxo badan oo da’yar ah oo ka dhisan La Masia waxaana si toos ah loogu soo dalacsiiyay kooxda kowaad isaga oo 16 sano jir ah kaas oo uu Valverde siiyay kalsooni layaableh.
Carles Perez ayaa isna ka mid ah da’yarta mustaqbalka wayn leh ee uu Valverde soo gardaadiyay si la mid ah da’yarka sida wayn loo qiimeeyo ee Riqui Puig kaas oo inta badan kulamadii saaxiibtinimo iyo kulamadii Copa del Rey waqti la siiyay.
Haddaba halkan kaga bogo 14ka da’yar ee uu Valverde kooxda kowaad kulamadoodii ugu horeeyay soo safay ee xarunta La Masia ka soo qalin jabiyay ama haddaba ku jira.
1-José Manuel Arnaiz
Ernesto Valverde ayay sumcad wayn u tahay in muddadii koobnayd ee uu joogay Barcelona in uu soo safay 14 xidig da’yar oo aan hore kooxda kowaad uga ciyaarin, wuxuuna wali wadaa in uu dhiiro galin siiyo kuwa kale ee La Masia ku jira.